बेलायतले किन दिएन खुस्बु ओलीलाई भिसा ? – Kathmandutoday.com
बेलायतले किन दिएन खुस्बु ओलीलाई भिसा ?
काठमाण्डु टुडे २०७१ कार्तिक २७ गते ९:४८ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २७ कात्तिक– प्रेमी गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’ को प्रहरी इन्काण्टरमा मृत्यु भएपछि एकाएक चर्चामा आएकी पूर्वमोडल खुश्वु ओलीलाई बेलायतले भिसाको म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
चरीको नियोजित हत्या गरेको भन्दै प्रहरीविरुद्ध सञ्चार माध्यममा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदै आएकी खुश्बु केही समयदेखि बेलायत छिन् । चरीको आडमा अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको भन्दै प्रहरीले आफूमाथि छानबिन थालेपछि खुश्बु पर्यटक भिसामा सुटुक्क बेलायत पुगेकी थिइन् ।
स्रोतका अनुसार तीन महिने म्याद सकिएपछि बेलायतले उनलाई भिसाको म्याद थप्न अस्वीकार गरेको छ । पर्यटक भिसामा बेलायत पुगेकी खुश्बुले विद्यार्थी भिसामा परिणत गर्न कोसिस गरेकी थिइन् । त्यसका लागि गरिएका विभिन्न प्रयास विफल भएपछि उनी अहिले लुकेर बसेकी छन् ।
उनको भिसा अवधि ६ नोभेम्बरमा सकिएको थियो । नेपालमा आफूविरुद्ध अनुसन्धान जारी रहेकाले उनी तत्काल नेपाल आउने सोचमा नरहेको पारिवारिक श्रोतले जनायो ।
खुश्बु अहिले साउथ इष्ट लण्डनको ग्रीनीचस्थित केमसिङ रोडमा आफन्तको घरमा बस्दै आएको सूचना प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ‘सिआईबी’ ले पाएको छ ।
प्रहरीले चरीले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको भोगचलन खुश्वुले नै गरेको सुइँको पाएपछि उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार खुस्बुसँग चरीको ५ करोडभन्दा बढी अवैध रकम छ । चरीले अवैध रुपमा आर्जन गरेको उक्त रकम खुश्बुले विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरेकी छन् ।
माओवादी निकट प्रेस सेन्टरको अधिवेसन सुरु
कांग्रेसकाे प्रदेश २ अधिवेशन शनिवार पनि स्थगित
राप्रपा महाधिवेशन– राति १० बजेसम्म मतदान, एक जनालाई १०– १५ मिनेट लाग्ने
माओवादी कमजोर भयो भने देश कमजोर हुन्छ, जनताका अधिकार खोसिन्छन्ः प्रचण्ड
नयाँ नेतृत्व चयन गर्न राप्रपाको मतदान सुरु